Kororka Koroona & kala sareynta Dalalka Caalamka! | Banaadir Times
HomeUncategorisedKororka Koroona & kala sareynta Dalalka Caalamka!
Kiisaska Fayruska Koroona ayaa sii kordhay todobaadyadii lasoo dhaafay, waxaa la diiwaangeliyay Xaalado cusub, Dhimasho & kuwa ka caafimaaday sida ay tebisay Hay’adda Caafimaadka Qaramada Midoobay u qaabilsan ee WHO.
Guud ahaan kiisaska Caalamka laga diiwaangeliya Covid-19 waa 58,986,439 (Konton & siddeed milyan, sagaal boqol, siddeetan & lex kun, Afar boqol, Soddon & sagaal), waxaa u dhintay 1,393,683 (Hal milyan, Saddex boqol, Sagaashan & saddex kun, lex boqol, siddeetan iyo Saddex), halka ay ka caafimaadeen 40,767,527 (Afartan Milyan, Todobo boqol, lexdan & todobo kun, shan boqol, labaatan & todobo).
11-waddan ugu sareeya kiisaska cudurka Covid-19 waxaa hoggaanka u haya Mareykanka oo ka diiwaangashan 12-Milyan, halka uu ugu hooseeyo Mexico oo isla Waqooyiga Ameerika ah oo Hal milyan iyo dhowr boqol oo kun laga helay cudurka.
Magacyada dalalka iyo sida ay u kala sareeyaan Kiisaska cudurka Coronavirus ayaa kala ah: Mareykanka, Hindiya, Brazil, Faransiiska, Ruushka, Spain, Ingiriiska, Talyaaniga, Arjantiin, Kolombiya & Maksiko.
Qaaradda Afrika waddanka ugu horeeya ee kala sareynta liiska dalalka laga diiwaangeliyay cudurka Covid-19 waxaa hoggaanka u haya Koofur Afrika oo dhanka kale guud ahaan Caalamka kasoo gashay booska 16-aad.
Itoobiya oo rabshado ka socdaan ayaa laga cabsi qabaa in xaaladda cudurka uu sii kordha sababta la xiriirka dadka ka baracay Deegaannadooda, kadib markii dagaal toos ah uu ka dhex qarxay Dowladda Federaalka Ismaamulka Tigray.
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya oo dhawaan sheegtay in baaristii ugu dambeeyay in lagu helay kiisas cusub oo xannuunka dilaaga ah ee Covid-19, balse booska hoose ayay uga jirtaa Qaaradda Afrika & guud ahaan liiska dalalka Caalamka.
Previous articleWasaaradda waxbarashada XFS oo maanta ka qeyb gashay Isxilqaan”SAWIRRO”
Next articleWaa maxay Sababta Abiy Ahmed waqti dheeraad uu u siiyay hoggaanka TPLF?